Nezvedu | Shanghai Xieyanshi Abrasives Co., Ltd.
Shanghai Xieyanshi Abrasives Co., Ltd. inyanzvi bhizinesi rinogadzira, kugadzirisa uye kutengesa zvigadzirwa zvine hasha. Isu takazivisa zvigadzirwa zvepasirese zvepamberi, izvo zvinogona kuburitsa zvakatemwa zvakasiyana zvevelcro-yakatsigirwa (chirauro uye chiuno), PSA (self-adhensive) sanding discs nezvimwe zvigadzirwa zvinogumbura zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi. Zvigadzirwa zvedu zvinoshandiswa zvakanyanya mukugadzira mota, kugadzirisa mota uye kugadzirisa, kuvaka ngarava, kugadzira fenicha, zvigadzirwa zvemagetsi, mbatya nemamwe maindasitiri.
Mumakore apfuura dhipatimendi reR & D rakaita kusimudzira kwakateedzana pane zvigadzirwa zvedu uye zvakagadziriswa zvigadzirwa, uye zvakaunganidza zvakawanda zvakakosha ruzivo.Zvigadzirwa zvedu zvakagamuchirwa kwakakwirira kubva kuvatengi.Mhando dzedu dzega "YS" 、 "XYS" 、 "YUQING" havana kungogamuchirwa zvakanaka mumusika wepamusha, asi zvakare vakagamuchirwa mune dzimwe nyika zhinji nematunhu pasi rese.
Kuva nyanzvi, kugadzira uye kuva mukutsvaga kugona! Kugutsikana kwevatengi ndiko kutsvaga kwedu kwekusingaperi! Timu yedu yehunyanzvi ichave inonamatira kune mweya wevatengi kutanga, uye gara wakagadzirira kupa neyedu nyanzvi, basa rekufunga uye rutsigiro rwehunyanzvi.
2011: Yakaendeswa kufekitori nyowani
2014: yakavambwa Mahara Guruva Mobile Dry Grinder
2016: tanga bhizinesi repasi rese Invest new fekitori, kusimudzira uye kugadzira abrasives.
2018: Yakapfuura CE chitupa
2019: Nyowani Chigadzirwa Yakagadziridzwa: Sander
- —Culture Culture - -
Kuva Unyanzvi, kugadzira uye kuve mukutsvaga kugona!
Kugutsikana kwevatengi ndiko kutsvaga kwedu!
Chikwata chedu chehunyanzvi chichave chinonamatira kumweya wevatengi kutanga uye gara wakagadzirira kupa vatengi needu ehunyanzvi, anofungawo sevhisi uye rutsigiro rwehunyanzvi.
- —R & D Simba - -
XYS inosvitsa michina yepamberi yepasirese uye yakavaka timu yekutsvagisa nekusimudzira, ivo vanachiremba, masters uye nyanzvi zhinji dzekunze dzekunze mune ino indasitiri.
- -Corporate Rukudzo - -
- —Kambani / Ratidziro yeFekitori— -
- Mubatanidzwa Wemubatanidzwa - -
- —Zviitiko / Zviratidzwa— -